China Professional Factory ho an'ny China SAE J1772 Level 2 Switchable Reserve EV Charger fanamboarana sy orinasa | Teknolojia iraisana
Orinasa matihanina ho an'i Sina SAE J1772 Haavo 2 Charger EV miovaova
Orinasa matihanina ho an'ny China EV Charger, vokatra elektrika, anaran'ny orinasa dia miompana amin'ny kalitao hatrany ho fototry ny orinasa, mitady fampandrosoana amin'ny alàlan'ny fahatokisana ambony, manaraka ny fenitra fitantanana kalitao ISO, mamorona orinasa ambony amin'ny fanahin'ny fandrosoana- manamarika ny fahitsiana sy ny fanantenana.
Manolotra vokatra sy serivisy fanatobiana vokatra na serivisy koa izahay ary serivisy fanamafisana ny sidina. Manana ny sehatry ny famokarana sy ny toeram-piasana izahay. Afaka manome anao mora foana ny karazana vokatra na serivisy mifandraika amin'ny varotra isan-karazany izahay ho an'ny Factory Professional ho an'i Sina SAE J1772 Haavo 2 Switchable Reserve EV Charger, "Ovao ho an'izay nohatsaraina!" no teny filamatray, izay midika hoe “Globe tsara kokoa no eo alohantsika, ka andao isika hankafy azy!” Miova ho amin'ny tsara!
Toeram-piampangana fiara elektrika JNT-EVC10 dia natsangana niaraka tamin'ny mpamaky karatra RFID ho famantarana ny mpampiasa. Miaraka amin'ny famolavolana ergonomika marobe, dia azo apetaka amin'ny rindrina na mpandeha an-tongotra izy io, ary manome onjam-peo hafa. Ny JNT-EVC10 dia mamela anao hanampy mora foana ny famoahana fiara elektrika ho tombony fanampiny ho an'ny fandraisam-bahiny, ny birao, ny tanàna ary ny fananana ara-barotra maro hafa.
Vonona vonona amin'ny tambajotra (LAN, 4G, na Wi-Fi) hifandray amin'ny rindrambaiko fitantanana OCPP manaraka ny antoko fahatelo.
Ny fikirakira fametrahana rindrambaiko miorina amin'ny rindrina na mijoro irery izay miasa ao anatin'ny fahaizanao mihodina mba hampihenana ny vidin'ny fametrahana.
Ny fanamarinana RFID azo antoka dia mamela ny fidirana amin'ireo mpamily EV.
Plug SAE J1772 ™ mahazatra izay mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny fiara elektrika mifono herinaratra sy hybrid.
4.3 ″ LCD hanehoana ny angon-drakitra rehetra momba ny fiara mandritra ny fijanonana. Afaka mahita ny fanjakana misy fiampangana, ao anatin'izany ny ankehitriny, ny herinaratra ary ny mari-pana. Tafiditra ao anaty boaty ny visy ka aza manahy sao milatsaka ny écran. Ny tariby 18ft na 25ft dia mamela toerana malalaka eo anelanelan'ny fiara sy ny tobim-piantsonana.
Ny station dia manana leveler herinaratra izay mampifandanja ny gara rehefa miasa ny fitaovana elektrika marobe.
Noho izany dia afaka miasa amin'ny onja tsy miova ny tobim-piantsonana, hisorohana ny fahatapahana sy ireo loza hafa azo antoka azo avy amin'ny tsy fandriam-pahalemana ankehitriny.
Ny vokatray rehetra dia ETL / CE, azo itokisana ny kalitao. Ny charger EV anay dia mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny fiara elektrika izay manaraka ny fenitra SAEJ1772.
Teo aloha: 7kw EV Charger tariby famandrihana ao an-trano miaraka amin'ny TUV Ce RoHS
Manaraka: 11.5kw AC EV Charger Dikan-teny kininina elektrika miandraikitra ny fiantsonana Solar EV
Toeram-piambenana bus bus China
Fiampangana fiara mpamokatra China Wall-Mounted EV Car
Pile an'ny herinaratra
Charger dingana telo
Famatsiana OEM Electric Electric Vehicle Charging ...
Ambaratonga 2 EV Charger Unit miaraka amin'ny Type 1 Outlet 16A ...
EV Charging Station Wall-Mounted Electric Charg ...